विश्रामपुरवासीले विकास नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई व्यङ्ग गर्दै सडकमा नै धान रोपे ! – KhabarTime
विश्रामपुरवासीले विकास नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई व्यङ्ग गर्दै सडकमा नै धान रोपे !
बीरगञ्ज , १९ असार । बारा जिल्लाको विश्रामपुर गाउँपालिका वडा नं। ५ का स्थानीयहरुले मुख्य सडकमा धान रोपेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरीलाल पाल सहित वडाध्यक्ष भोला साह सोनारले सडक मर्मत नगरेको भन्दै विरोध स्वरुप स्थानीयहरुले सडकमा ट्याक्टरले जोतेर धानको वीउ रोपेका हुन् । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएदेखि नै विकासको नाममा विग्रेको सडकमा एक टोकरी माटो पनि नखसालिएको भन्दै स्थानीयहरुले सडक बनाउन नसक्ने गाउँपालिका प्रमुखलाई सडकबाटै धान फलाएर दिने भन्दै हिल्लामे सडकमा ट्याक्टरले जोतेर धानको वीउ रोपेका हुन् ।
स्थानीयहरुका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष पालले आफ्नो घर भएको वडामा मात्रै विकास निर्माणका कार्यहरु गरेको र वडा नं। ५ का वडाध्यक्षले पनि आफ्नो घर भएको स्थानमा मात्रै १०० मिटर जति सडक ढलान गरेको, बाँकी स्थानमा कुनै किसिमको सडक निर्माणको कार्य नगरेको भन्दै ‘यस्ता जनप्रतिनिधि हामीलाई चाँहिदैन भन्दै’ मुर्दावादको नारा समेत लगाएका थिए । गाउँपालिको वडा नं. ५ इटियाही बजार स्थित वडा कार्याल अगाडि नै रहेको मुख्य सडक घुँडा भन्दा माथिसम्म हिल्लामे बनेको छ । वडा कार्यालय रहेको स्थान पनि पोखरी बनेको छ ।
साधारणतया पानी पर्दा पानीको निकासको लागि नाला पनि निर्माण गरिएको छैन । कच्ची सडक भएको कारण ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्डी छ । खाल्डा खुल्डी भएको सडकमा ट्याक्टर हिँडेको कारण भएको सडक पनि झन विग्रेर हिल्लामे बनेको छ । उक्त वडामा रहेका करिब ५ हजार जनताहरु सडकको कारण पीडित छन् । सडकबाट पैदल हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । कुनै बेला विरामी परे एम्बुलेन्स जान सक्ने अवस्था छैन् ।
सडक निकासको लागि २०७६ सालमा समिति पनि गठन गरिएको हो तर गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षको आसेपासे भएको कारण सडक निर्माण कार्य हुन सकेन ।
वडाध्यक्षले आफ्नो घर भएको स्थानमा सडकको एकतर्फ ढलान गरेका छन् भने बाँकी सडक जस्ताको त्यस्तै छ । सडक निर्माणको लागि सडक छेउमा रहेका एक दर्जन भन्दा बढी घरहरु भत्काइएको छ तर त्यसको कुनै अर्थ छैन । घर भत्काएर १५ फिटभन्दा बढी चौडाई सडक बनाइएको छ तर पूरै सडक हिल्लामे छ । सडक निर्माणको नाममा जनप्रतिनिधिले गरीब परिवारहरुको घर भत्काएर बेघर बनाएका छन् तर सडक निर्माण कार्य भने गरेका छैनन् । गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयको बजेटमा सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ तर त्यो कागजमा मात्रै सीमित छ ।
गाउँपालिकाले एउटा अर्कोपनि अभियान सञ्चालन गरेको छ ‘एक घर एक धारा’ तर त्यो पनि नारामा मात्रै सीमित छ । त्यसको लागि छुट्याइएको बजेटले गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता तथा नातेदारहरुको घरमा चाँपाकल गाडेका छन् त्यस बाहेक कसैको घरमा चाँपाकल गाडिएको छैन । तर यो कार्यक्रम सफल भयो भनेर शिलालेख पनि तयार पारिसकिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष तथा वडाध्यक्षले यसरी मनोमानी गरि रहेको अवस्थामा स्थानीयहरुले विकास निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिन पटक पटक आग्रह गर्दा जनप्रतिनिधिले नटेरेको स्थानीयहरुको आरोप छ । गाउँपालिका अध्यक्षले हालसम्म वडा नं. ५ का स्थानीयहरु कसरी बाँचिरहेका छन् भन्ने हेर्न पनि नआएको गुनासो पोखे ।
गुनासो राख्न गाउँपालिका पुग्दा अध्यक्षले भेट्न नमान्ने, भेटे पनि ति वडाको विकास कहिलेपनि हुँदैन भनेर खुलेआम गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । निर्वाचनको बेला ठूला ठूला सपना देखाएर निर्वाचन जितेका गाउँपालिका अध्यक्ष अहिले आएर वडा नं। ५ का स्थानीयसँग यस गाउँपालिकाको नागरिक नै नरहेको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यसरी सडकको सास्ती खेप्दै आएका वडा नं। ५ का स्थानीयहरु बाध्य भएर सडकमा नै धान रोप्नु परेको र वडा कार्यालयमा ताल्चा पनि लगाउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको बताए । उनीहरुले वडा कार्यालयमा ताल्चा समेत लगाएका छन् ।
Tags: जनप्रतिनिधिप्रदेश २बिकासराजनितिसरकार
के तपाईलाई भाग्यले साथ दिइरहेको छैन ? अपनाउनुहोस् यस्ता विधि!!
केपी ओलीले गरे ऐतिहासिक घोषणा! अब प्रधानमन्त्री र सबै पद नया पुस्तालाई सुम्पेर बृद्द्भत्ता खाएर बस्ने !